Vana vako pavanenge vachikura, ungavabatsira sei kuti vazive kuti nei zvakakosha kuteerera? Ungavadzidzisa sei unyanzvi hunozovabatsira pavanenge vakura? Imbonzwa zvakataurwa nevamwe vabereki vari munyika dzakasiyana-siyana.
MABASA EPAMBA UYE KUSHAMWARIDZANA NEVAMWE
“Patinodya pamwe chete uye patinokurukura zvaswera zvichiitika, mwana oga oga anodzidza kuteerera. Pavanotiona isu vabereki tichinyatsoteerera, zvinoita kuti vateererewo vamwe uye ivo pachavo havazozvitarisiri pasi.”—Richard, Britain.
“Zvinofadza kuona vana vachiremekedzana uye vachigadzirisa zvavanenge vasina kuwirirana isu tisingapindiri. Vanokurukurawo nevanhu vakuru vaine chivimbo.”—John, South Africa.
“Ndiri munhu anotadzawo, dzimwe nguva ndinogumbura vana vangu ndisingazvizivi. Saka kana ndavakanganisira ndinotofanira kuvakumbira ruregerero.”—Janelle, Australia.
“Tinodzidzisa vana vedu kuita mabasa epamba. Kuvadzidzisa kuita mabasa kunobatsira vamwe kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mumhuri uye kuti muve norugare uye vana vedu vanobva vaona kuti pane zvavanenge vaita.”—Clive, Australia.
“Zvakakosha kuti tivadzidzise kuti vanzwisisane, varemekedzane, uye varegererane, kunyange hazvo zvisiri nyore.”—Yuko, Japan.
“Vana vedu pavaive vaduku, takavadzidzisa kuti vagone kugeza voga uye taiita kuti zvinakidze pataishandisa sipo nechipanji zvakagadzirwa kunge zvimidhori.”—Edgar, Mexico.
“Pataigara munzvimbo yakanga isina pombi yemvura, ndaiva nechokwadi chokuti sipo iripo uye mvura iri payaionekwa nomunhu wose kuti tigeze maoko edu tisati tapinda mumba.”—Endurance, Nigeria.
“Tinopa vana zvokudya zvinovaka muviri zuva roga roga, uye tinovatsanangurira kuti nei zvichikosha kuti vadye chikafu chakadaro. Vana vanoda kuziva kuti zvii zvandinenge ndaisa muzvokudya zvakasiyana-siyana zvandinenge ndabika, saka ndinoita kuti vandibatsire pakugadzira zvokudya zvacho. Nguva iyoyo yatinenge tiri pamwe chete inotipawo mukana wokuti tikurukure.”—Sandra, Britain.
“Kuekisesaiza kunokosha, uye sevabereki, tinotozviita kuti vana vaone kukosha kwazvo. Vana vedu vanonakidzwa patinomhanya, kutuhwina, kuchovha mabhasikoro kana kutamba mimwe mitambo tiri pamwe chete semhuri. Vanodzidza kuti kuekisesaiza kunokosha uye kunoita kuti tinakidzwe.”—Keren, Australia.
“Vana ungavapa mari, zvipo kana kuti kuvarongera kwekunovhakacha. Asi chavanonyanya kuda kuva nenguva yakawanda nevabereki vavo. Mabasa andinoshanda ndeanoitwa mangwanani vana pavanenge vaenda kuchikoro. Kana ava masikati, ndinozoswera ndava nevana.”—Romina, Italy.
“Takaona kuti kutsiura kunosiyana-siyana zvichienderana nokuti chikanganiso chacho chakaita sei. Dzimwe nguva tinogara pasi kuti titaure nemwana kana kumunyima zvimwe zvinhu zvaanga achifanira kuwana.”—Ogbiti, Nigeria.
“Tinoita kuti vana vedu vadzokorore mirayiro yatinenge tavapa kuti tive nechokwadi chokuti vainzwisisa. Zvadaro tobva tachivaudza kuti vachiita zvatataura. Kuti tibatsire vana vedu kuti vaite zvavanenge vaudzwa, tinovaranga kana vasina kuita zvinodiwa.”—Clive, Australia.
“Pandinotsiura vana vangu ndinopfugama kuti tinyatsotarisana uye ndakaona kuti izvi zvinobatsira kuti vanyatsoteerera. Zvinoita kuti vaone zvandinoita chiso changu, pakusimbisa zvandinenge ndichitaura.”—Jennifer, Australia.
“Tinoedza kudzivisa kuudza vana vedu kuti, ‘Haumboteereri,’ kunyange patinoona kuti akanganisa zvechokwadi. Uyewo hatitsiuri mwana wedu pamberi pevamwe vana. Tinogona kuita zvokuzevezera kana kutaura naye pasina vanhu.”—Rudi, Mozambique.
“Vana vari nyore kufurirwa, uye vanoda kutevedzera vamwe. Saka tinofanira kudzidzisa vana vedu tsika dzakanaka kuti vasakanganiswa nevavanodzidza navo kuchikoro, nezvinobudiswa mumabhuku kana mumaTV, uye nevanhu vari munharaunda. Kuva netsika dzakanaka kunozovabatsira kuti vadzivise zvinhu zvakashata.”—Grégoire, Democratic Republic of the Congo.
“Chirango chinofanira kunge chakasimba, chichienderana nezvakanganiswa, uye chisingachinji-chinji. Vana vanofanira kuziva chirango chavanowana kana vachinge vakanganisa uye kuziva kuti zvaunenge wataura ndizvo zvaunoita.”—Owen, England.
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 14]
“Musashusha vana venyu, kuti varege kuora mwoyo.”—VaKorose 3:21
[Bhokisi/Mufananidzo uri papeji 15]
Kubudirira Kurera Vana Somubereki Mumwe Chete
Yakataurwa naLucinda Forster
Chii chinonyanya kukuomera somubereki mumwe chete?
Kungova mubereki kwagara kwakaoma, asi chinonyanya kundiomera kuronga zvinhu zvangu. Zvinoda nguva yakawanda kuti uti uku uri kudzidzisa vana tsika dzakanaka uku uri kudawo kuwana nguva yokumbozorora muri mose. Kakawanda ndinotopedzisira ndarega zvokuzorora kuti ndiite mabasa epamba.
Unoita sei kuti urambe uchikurukura zvakanaka nevanasikana vako?
Vana vanonetseka uye havafari panorambana vabereki. Matambudziko paanomuka ndakaona kuti kutaura nenzwi risina hasha uye takaita zvokutarisana zvinokosha. Patinenge tazogadzikana, ndipo pandinozoedza kutaura zviri kundidya mwoyo ndisingaiti kuti nyaya yacho ive nyaya hombe. Ndinonzwawo mafungiro avo, ndonyatsoteerera, uye ndinovaratidza kuti ndinokoshesa chaizvo mafungiro avo. Ndinofarira kunzwa zvavanodzidza kuchikoro uye ndinovarumbidza nezvavanoita. Tinowanzodya pamwe chete takadekara zvedu. Ndinogarawo ndichivaudza madiro andinovaita.
Vana vanoda mirayiro yakajeka, uye kusaichinja-chinja kunokosha. Ndinoedza kuva nemutsa, asi ndisingatsuduguki. Ndinokurukura nevana vangu ndichivabatsira kuti vaone kuti nei mamwe maitiro akaipa. Ndinoitawo kuti vataure zvavanofunga ndisati ndavatsiura, kuti ndizive kuti nei vaita zvinhu zvakadaro. Kana ndiri ini ndakanganisa, zvichida nemhaka yokuti handina kunzwisisa zvaitika, ndinovakumbira ruregerero.
Unodzidzisa sei vana vako kuti varemekedze vamwe?
Ndinovayeuchidza kuti vaitirewo vamwe zvavaizoda kuitirwa sezvakadzidziswa naJesu. (Ruka 6:31) Ndinovakurudzira kuti vaedze kugadzirisa voga zvavanenge vakanganisirana, uye ndinovadzidzisa kukosha kwokupindura nounyoro uye nomutsa kana vashatiriswa.
Zvii zvamunoita pakutandara?
Hapasi pose patinokwanisa kuvhakacha, saka tinotarisa mupepanhau kuti tione kwatingatandarire kusingadhuri. Tinofamba-famba kana kuenda kunzvimbo dzinodyarwa miti nemaruva. Uyewo tinodyara zvinhu zvakasiyana-siyana mugadheni redu zvatinozoshandisawo pakubika. Kuva nenguva yokumbofurwa nemhepo kwakanaka.
Zvii zvinokufadzai uye mibayiro yei yamuri kuwana?
Hazvisi nyore kurarama mumhuri ine mubereki mumwe chete, asi izvi zvaita kuti tiswedere pedyo napedyo, uye takadzidza kuonga makomborero atinawo. Ndinofarira kuona kukura kuri kuita vana vangu. Pazera ravari vanoda kuva neni, uye ndinonakidzwa nokuva navo. Kana ndichifara kana kuti ndisingafari vanozviona uye dzimwe nguva vanondimbundira vachiitira kuti ndisanetseka. Rudo rwavanondiratidza rwunondibaya mwoyo. Chinonyanya kukosha ndechokuti tiri kuona kuti Musiki anotida uye ari kutibatsira kutsungirira matambudziko akawanda atinosangana nawo. Bhaibheri riri kundipa simba rokuti ndirambe ndichiedza kuva mubereki akanaka.—Isaya 41:13.
Lucinda nevanasikana vake, Brie naShae
g11 October pp. 13-15